Monday June, 18 2018 - 22:04:58
Monday February 19, 2018 - 21:25:56 in by salman abdi
Deegaanka loo yaqaan Biyo-kulule waxa uu dhacaa ama ku yaallaa gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera.
B I Y O – K U L U L E / B I Y O – G U U R E
Deegaanka loo yaqaan Biyo-kulule waxa uu dhacaa ama ku yaallaa gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera. Waxa uu masaafo 23Km ah bari ka xigaa magaalada Berbera. Dabcan waa duleedka koonfur-bari ee tuulada Biyo-guure oo qiyaastii ilaa 4Km u jirta goobta magacan leh.
Deegaankan Biyo-kulule oo ah goob inta u badan ujeeddooyin caafimaad loo tego, waxa mara doox ama tog biyuhu badanaa habeenkii soo kordhan. Biyahani waxa ay ka soo burqadaan buuro waaweyn oo goobta Biyo-kulule koonfur ka kulaalaaya. Sida darteed goobtan waxa hore loo odhan jiray Biyo-guure, maadaama oo ay biyaha dooxa maraa habeenkii soo guureeyaan oo ay isa soo taraan, maalintiina ay yaraadaan.
Magacan Biyo-kulule waxa goobta u soo jiiday oo sababay in uu ka horumaro magacii soo-jireenka ahaa ee Biyo-guure biyaha yare e diirran ee lagu soo dabbaasho/baddaasho iyada oo dawo laga raadinaayo.
Iyada oo guud ahaan ba biyaha goobta ee xataa dooxa maraya diirranyihiin, haddana biyaha diirrani waxay ku badanyihiin oo la galaa saddex goobood oo isu dhow. Meesha ugu horraysaa waa meesha ugu caansan oo dadku inta ugu badan galaan oo waa halka ugu horraysa ee la tego. Waa goob ay biyo aad u yari fadhiyaan laakiin leh dhinac ay ka sii baxaan iyo meel ay kaga soo galaan. Waxa xusid mudan in ay goobtani u kala qaybsantahay laba qaybood oo ragga iyo dumarku kala galaan laakiin aad isagu dhow. Sidoo kale, goobahan kolka la gelaayo kaba waa laga bixiyaa si nadaafadda biyaha loo ilaaliyo.
Goobta labaad waa meel ilaa 400 oo tallaabo koonfur kaga beegan goobtan hore. Halkani waa meesha lagu magacaabo ‘Jacda’ maadaama oo ay ka kulushahay halkii hore. Badi dadku markay galaan dib bay uga soo boodaan iyaga oo mooday in duubkii iyo diirkii ka muldhadeen! Jacdu waa moqor ama godan yar oo ka gun fidsan kii hore. Jacdu, waa meel keliya oo ragga iyo dumarku isaga baxaan si ay marba qolo u soo gasho. Waxa se dhinaca ku haya biyo-fadhiisn kale oo leeg oo isaga biyo caadi ahi fadhiyaan. Sidoo kale, goobtan Jacda waxaad arkaysaa isha ay biyaha kululi ka soo burqanayaan oo ay ciiddu fidhfidh leedahay kulayl dartii!
Halkan marka koonfur-bari looga sii socdo in yare ee dooxa ama dixda la sii raaco, waxa aad gaadhaysaa goob ay biyuhu ka soo shalwanayaan oo la is hoos taago. Halkani waa goobta la yidhaahdo ‘Feedh iyo Laad’. Waa meel kale oo iyana loo aado ujeeddooyinka kuwan hore loo yimaaddo. Dabcan uma kulula sidii Jacda halkani, waxay se leedahay biyo cadaadis (Pressure) wata oo ku tumaya markaad is hoos taagto!
Biyo-kulule oo badanaa laga galo bartan ugu horraysa ee aynu soo sheegnay, badanaa waxa la tegaa inta jiidda Gubanka iyo Xeebtu qabowga tahay oo ku beegan dabayaaqada bisha December ilaa horraanta bisha March. Shantan bilood oo heer-kulka biyaha suurto gal tahay in la galo, goobtu waxa ay noqotaa mid dad badani joogaan. Waxa ka dhisma waabab badan oo dadku isaga baxaan marka ay degayaan iyo marka ay ka soo laabanayaan. Dadku badi waxa ay ku negaadaan 3 casho, 7 casho iyo Bil.
Bilahan cimilada goobtu sahlantahay ee aynu soo sheegnay waababka, balbalooyinka ama cooshadaha ka dhismaa waxay gaadhaan 40-60 cooshadood oo la deganyahay, iyada oo ilaa 20 bukaan oo kalena bannaanada jiifsadaan. Wax dhisme ah goobtan waxa ka dhisan Masjid aad u yar oo ay ka soo dhistay inan goobtan Alle caafimaad ka siiyay oo qurbaha uga timi sida la ii sheegay.
Goobtan marka aad gaadho waxa aad arkaysaa bukaan-socod/jiif badan oo ay mudantahay in lagu cibro qaato. Waxaad arkaysaa dad badan oo xanuunno badan oo kala geddisan ka cabanaaya. Waxaad dareemaysaa farqiga u dhexeeya kan caafimaadka haysta ee laafyoonaaya iyo kan buka ee laba legdoonaaya.
Ugu dambayntii, Alle caafimaad dhamays tiran ha siiyo cid wal oo muslin ah oo bukta. Alle caafimaad ha ka siiyo dadka goobtan jooga ee dal iyo debad ba uga yimi. Alle caafimaadka ha u siyaadiyo inta manta caafimaad haysata. Aamiin, Aamiin, Aamiin.
W/Q: Hibo-maal Afrika Cali
Burco:-Saylada Xoolaha Ee Burco Oo Ah Saylada Ugu Wayn Geeska Afrika Oo Laga Dareemayo Dhaq Dhaqaaq Xoogan.
Hargeisa:-Xildhibaan Naasir Cali Shire Oo Waddani Ugu Baaqay Inay Guddi U Saaran Sababta Guul Daradoodi+Arimaha Soo Kordhay.
10/06/2018 - 17:13:34
Caalamka:-Qaramada Midoobay oo ka deyrisay xaaladda Jamhuuriyada Afrikada dhexe.
Caalamka:-Masuuliyiin kubadda cagta Afrika ah oo laaluush lagu eedeeyey
07/06/2018 - 08:42:16